Cimilada Nobel Prize Cimilada 2021: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 07/10/2021 14:26 | Ciencia
Barashada cimilada waxay ku lug leedahay kakan iyo mas'uuliyad weyn. Sidaa darteed, the Abaalmarinta cimilada ee Nobel 2021 ku socota saddex saynisyahan oo daraasaddooda fiisigiska iyo cimiladu jabisay jaantusyada. Dadka ku guuleystay abaalmarinta Nobel -ka waa Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann, iyo Giorgio Parisi. Saddexdaan saynisyahan waxay ku guuleysteen inay sharxaan mid ka mid ah ifafaalaha ugu adag ee lagu fahmi karo sayniska.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato abaalmarinta Nobel ee cimilada 2021 iyo muhiimadda ay leedahay.
1 Abaalmarinta Nobel ee Cimilada 2021
2 Nidaamyada kakan
3 Muhiimadda Abaalmarinta Nobel ee 2021 ee Cimilada
Abaalmarinta Nobel ee Cimilada 2021
Ifafaaladu aad bay u adag tahay oo waxaa loogu yeedhay nidaamyo jireed oo adag. Magaceedu aad buu u soo jeedinayaa dhibka fahamkiisa. Saameyntu waxay ka koobnaan kartaa atomic ilaa miisaanka meeraha waxayna saamayn ku yeelan kartaa dabeecadda elektarooniga ee caadiga u ah cimilada meeraha oo dhan. Sidaa darteed muhiimadeeda.
Talaadadii, Akadeemiyada Sweden ayaa ku abaalmarisay kaalintii uu ka qaatay cilmi baarista iyo saameynta uu ku yeeshay kuleylka adduunka, waxayna ku abaalmarisay abaalmarinta caanka ah ee Nobel Prize ee Fiisigiska. Saddex saynisyahanno ah, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann iyo Giorgio Parisi, oo hormuud u ah cilmi -baarista nidaamyada adag iyo khubaro kale oo ku saabsan saamaynta cimilada, ayaa lagu dhawaaqay inay yihiin guuleystayaasha daabacaadda 2021.
Xoghayaha Akadeemiyada Cilmiga Swiidhan, Göran Hansson, ayaa warkan jabiyay, isagoo xusay in abaalmarinta la siiyay cilmi -baarayaashan ay tahay wax -ku -biirintooda hal -abuurka leh ee fahamkeenna ku aaddan nidaamyada jirka ee adag. Abaalmarinta, iyo sidoo kale abaalmarino caafimaad, kiimiko iyo suugaaneed oo lagu dhawaaqay toddobaadkan, ayaa lagu bixin doonaa xaflad abaalmarinno ah oo ka dhici doonta Stockholm 8 -da December.
Sida laga soo xigtay Akadeemiyada Iswiidhan, 73-jirka Talyaaniga ah Giorgio Parisi ayaa ku guuleystay abaalmarin gaar ah oo uu ku helay "qaabab qarsoon oo ku jira alaab qalafsan oo adag." Helitaankiisu waa mid ka mid ah tabarrucyada ugu muhiimsan ee aragtida nidaamyada kakan.
Syukuro Manabe oo u dhashay Japan iyo Klaus Hasselmann oo u dhashay Jarmalka ayaa ku guuleystay abaalmarino ku aaddan “asaasiga ah” ee ay ka geysteen qaabaynta cimilada. Manabe, oo 90 jir ah, ayaa muujinaysa sida kordhinta kaarboon laba ogsaydhka ee jawiga ku jira ay keento in heerkulka sare ee Dhulka kor u kaco. Shaqadani waxay aasaaska u dhigtay horumarinta moodooyinka cimilada ee hadda jira. Sidaas oo kale, Klauss Hasselmann, oo 89 jir ah, ayaa hormuud u ahaa abuurista qaab isku xira saadaasha hawada iyo cimilada.
Nidaamyada qalafsan ee miisaanka atomiga iyo meeraha ayaa wadaagi kara sifooyin gaar ah, sida fowdo iyo khalkhal, dabeecadduna waxay u muuqataa inay ku badan tahay fursad.
Parisi wuxuu sameeyay kaalintiisii ​​ugu horreysay ee cilmi baaristiisa fiisikiska isagoo falanqeeyay biraha birta ah ee loo yaqaan dhalada.ama meerto, taas oo atamka birta si aan kala sooc lahayn loogu dhex qaso daloolka atamka naxaasta ah. In kasta oo ay jiraan dhowr atam oo bir ah, waxay u beddelaan astaamaha birlabka ee maaddada waxyaabo xiiso leh oo dhib leh.
73 jirkan Parisi ayaa ogaaday in xeerarka qarsoon ay saameeyaan habdhaqanka u muuqda mid aan kala sooc lahayn ee qalabka adag wuxuuna helay hab lagu tilmaamo xisaab ahaan. Shaqadiisu ma khusayso oo kaliya fiisigiska, laakiin sidoo kale waxay ku lug leedahay dhinacyo aad u kala duwan sida xisaabta, bayoolaji, neerfaha, iyo barashada mashiinka (sirdoonka macmalka ah).
Guddiga ayaa sheegay in natiijada saynisyahanka "U suurtogeli dadka inay fahmaan oo qeexaan waxyaabo badan oo kala duwan oo sida muuqata gebi ahaanba aan kala sooc lahayn". Akadeemiyada Iswiidhan hadda waxay u aragtaa dhalada wareegaysa inay tahay astaanta dabeecadda cimilada ee adag iyo baadhitaanka ay Manab iyo Hasselmann sameeyeen sannado kadib. Wayna adag tahay in la saadaaliyo hab-dhaqanka muddada fog ee nidaamyada jireed ee adag, sida cimilada dhulkeenna.
Manabe, oo ka soo shaqeeyay Jaamacadda Princeton ee dalka Mareykanka, ayaa hormuud u ahayd sameynta moodooyinka cimilada jirka ee 1960 -meeyadii, taasoo horseeday in gabagabada qiiqa kaarboon laba -ogsaydh ay kululaato meeraha. Sababtoo ah qaabkeeda qasan, cimilada dhulkeenna waxaa loo tixgeliyaa nidaam jireed oo adag. Isla sidaas oo kale, Hasselman wuxuu adeegsaday cilmi -baaristiisa si uu uga jawaabo su'aasha ah sababta ay moodooyinka cimiladu u noqon karaan kuwo la isku halleyn karo, inkastoo cimiladu ay tahay mid is -beddeli karta oo qasan.
Moodooyinka kumbuyuutarkan ee saadaalin kara sida Dhulku uga jawaabi doono qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ayaa lagama maarmaan u ah fahamkayaga kulaylka caalamiga ah.
Sida Professor John Wettlaufer oo ka tirsan Jaamacadda Yale uu sharraxay, fiisigis -yaqaanka Talyaaniga ayaa ka 'dhisaya khalkhalka iyo isbedbeddelka nidaamyada adag ee heerka micro', iyo shaqada Syukuro Manabe ay tilmaamayso 'hel qaybaha qaybaha hab -socod keli ah. Oo isu gee si aad u saadaaliso hab -dhaqanka habdhismeedka jirka ee adag. ”“ In kasta oo ay abaal -marinno u qaybiyaan qaybta cimilada iyo qaybta khalkhalka, dhab ahaantii way isku xidhan yihiin, ”ayuu sharraxay.
Muhiimadda Abaalmarinta Nobel ee 2021 ee Cimilada
Mid ka mid ah gunaanadkii go'aanka ka tagay, gaar ahaan doorashooyinkii Manabe iyo Hasselman, ayaa ah in dadka loo soo jeediyo dhibaatooyinka cimilada.
Sida laga soo xigtay Wettlaufer, iyada oo loo marayo abaalmarinta, Guddiga Nobelka ayaa soo jeediyay "laba -lahaanshaha u dhexeeya barashada cimilada dhulka (laga bilaabo milimitir ilaa cabbirka dhulka) iyo shaqada Giorgio Parisi." Dr. Martin Juckes, oo ah madaxa cilmi -baarista sayniska hawada Qofka iyo agaasime ku -xigeenka Xarunta Falanqaynta Xogta Deegaanka ee Ingiriiska (CEDA) ayaa sheegay in aragitaanka saynisyahannadu ku guuleysteen abaalmarinta Nobel Prize ee Fiisigiska shaqadooda cimilada waa “war wanaagsan”.
"Dhibaatada nidaamka cimilada, oo ay weheliso halista xiisadda cimilada, waxay sii wadaa inay caqabad ku noqoto saynisyahannada cimilada maanta," ayuu yiri.
Sidaad arki karto, xiisadda cimilada ee aan wajahayno qarnigan waxay ka dhigaysaa saynisyahannadu inay geliyaan xaalad furan ama inay awoodaan inay helaan xalal macquul ah. Isbeddelka cimiladu wuxuu ku hanjabayaa inuu beddeli doono dunida aan ognahay oo in badan oo ka mid ah nidaamyadeenna dhaqaale waxay u baahan yihiin xasilloonida aan maanta ku haysanno cimilada.
Waxaan rajaynayaa in xogtan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan muhiimada ay leedahay Abaalmarinta Nobel ee Cimilada 2021 iyo astaamaha lagu garto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Cimilada Nobel Prize Cimilada 2021
DeepMind AI ayaa si fiican u saadaalin karta cimilada